कलाकारमा हुनुपर्ने सबैभन्दा ठुलो गुण भनेको अनुशासन हो : आशा विसी | दर्पण दैनिक
कलाकारमा हुनुपर्ने सबैभन्दा ठुलो गुण भनेको अनुशासन हो : आशा विसी
प्रकाशित मिति: २०७८ फाल्गुन २१ गते ०७:३४
गायिका आशा विसी
तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिका १२ कबाजितमा जन्मिएकी आशा विसी लाइभ दोहोरी तथा रेकर्डिङमा अब्बल गायिका हुन । ऊनी अहिले लाईभ दोहोरीमा बढी व्यस्त हुन्छिन । आशालाई लाईभ दोहोरीबाट गायिका भनेर चिनाएको भएपनि उनका रेकर्ड गीतहरू पनि धेरै छन । जीवनमा आएका हरप्रकारका उत्तरचढावलाई पार गर्दै अगाडि बढेकी विसीले विक्रम संवत २०६९ सालबाट गीतसङ्गितको क्षेत्रमा यात्रा तय गरेकी हुन् । यस क्षेत्रमा लागेपछि धेरै समस्याहरु आए तर उनले कहिल्यै हार खाईनन । प्रस्तुत छ उनै संघर्षशील गायिका आशा विसीसग दर्पण दैनिकका लागि केशर विश्वकर्माले गरेको छोटो कुराकानी:
आशाजी दर्पण दैनिकमा स्वागत छ ।
गीतसंगित क्षेत्रमा लाग्नुभएको कति भयो ?
म कलाकारितामा लागेको लगभग एक दशक जति भयो ।
यो क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा कहाँबाट पाउनु भयो ?
मलाई पढाउने मेरो गरु गाेपिबाहादुर अधिकारीबाट मलाई यो क्षेत्रमा आउन प्रेरणा मिलेको हो ।
लाईभ दोहोरीमात्रै गाउनु हुन्छ कि शब्द लेख्ने तथा गीत रेकर्ड पनि गर्नुभएको छ ?
म गायिका भनेर चिनेको त लाईभ दाेहाेरीबाट नै हो तर मैले गीतहरु रेकर्ड पनि धेरै गरेको छु । शब्द पनि लेख्ने गर्छु ।
आशा जी हालसम्म कतिजति गीत रेकर्ड गर्नुभएको छ नि ?
मैले अहिलेसम्म ३ दर्जनको हाराहारीमा गीत गाएको छ । गिलास र कचौरा यति धेरै माया लाकाे मुटुमा रचाैर, तिर्खा कलल, बुट्टे चाेलि छ, नराेए आमा मै छाेरी सम्झेर लगायतका छन ।
यो क्षेत्रमा लागेपछि के कस्ता समस्या तथा चुनौती भोग्नु परेका छन ?
सुरुका दिनमा धेरै गाह्राे थियोे तर हार कहिले खाईनँ । हुन त हरेक क्षेत्रमा आआफ्नै खालका दुख त हुन्छ नै । तर यो क्षेत्र अरुभन्दा अलि फरक छ । समस्याहरु पनि धेरै छन । तर समस्या आयो भन्दैमा पछि हट्नु हुन्न । समस्यालाई समाधान गर्दै जानुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा गितसङ्गीतबाट बाँच्न सक्ने अवस्था छ ?
अहिलेको परिस्थितिमा गीतसंगितबाट मात्रै बाँच्न गाह्रो छ । मेला महाेत्सव जस्ता कार्यक्रमहरु पाईयाे भने केही सहज । हुन्छ गित मात्र गाएर त धेरै गाह्राे छ ।
विशेष गरी तपाईंलाई कस्ता खालका गीतहरु मन पर्छ ?
पछिल्लो समयमा धेरै खालका दाेहाेरी गितहरु बजारमा आएका छन । मन त सबै प्रकारका गीतहरू पर्छन् । विशेष गरी अलि घुमेका ढिलो मेलोडीका गितहरु मन पर्छ । त्यस्तै खालका गीतहरू गाउने गर्छु ।
तपाईं एक छोरी मान्छे हुनुहुन्छ, सुटिङ गर्न, रेकर्ड गर्न घरबाट बाहिर जानुपर्ने हुन्छ त्यो वातावरण मिलाउन घरपरिवारबाट कतिको सहयोग पाउनुहुन्छ ?
सुरुका दिनहरुमा मलाई धेरै गाह्राे भयो । मेरो बाबा ममिलाई बुझाउन सम्झाउन सकिएन । त्यसकारण खासै सपाेर्ट पाईनँ । म आफ्नै जिद्दीले काठमाडौं आएँ । मैले गाएका गितहरु बजारमा आउन थाले । त्यस पछि मेरो ममि बाबाले पनि बुझ्नु भयो । अहिले त म आफ्नै खुशीले काम गर्छु । अहिले खासै अप्ठ्यारो छैन ।
यो क्षेत्रमा आउने नव आगन्तुक प्रतिभालाई के भन्नुहुन्छ ?
पछिल्लो समयमा धेरै राम्रो गाउने भाई बहिनीहरु आउनु भएको छ । यहाँहरुलाई म के भन्छु भने हामीले संगित सिकेर कहिले पनि सकिदैँन । राम्रोसँग सिक्नुस् र अझै अगाडि बढ्नुस । सबैभन्दा ठुलो त कलाकारमा हुनु पर्ने गुण नै अनुशासन हो । आफु अनुशासनमा बसेर आफ्नो काम गर्नुस् एकदिन पक्कै सफल भैईन्छ, यहीँ नै भन्न चाहान्छु ।
यदि यो क्षेत्रमा प्रवेश नगर्नु भएको भए कुन क्षेत्रमा लाग्नुहुन्थ्यो ?
म बुझ्ने र गाउँने भए देखि नै यो संगित क्षेत्र भन्दा बाहेक अरु क्षेत्र साेच्दैनथेँ । यस क्षेत्रमा नलागेको भए सायद यतिबेला बिहे भैसकेको हुन्थ्यो हाेला र पराईघरमा हुन्थेँ होला ।
धेरैधेरै धन्यवाद हजुर लगायत दर्पण दैनिकका सम्पूर्ण टिमलाई ।